DHAGEYSO: Shirka dib-u-heshiisiinta beelaha Galmudug oo goor-dhow la soo xirayo, intee wax marayaan iminka? | HalQaran.com
DHAGEYSO: Shirka dib-u-heshiisiinta beelaha Galmudug oo goor-dhow la soo xirayo, intee wax marayaan iminka?
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta Beelaha Galmudug Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow ayaa sheegay in uu gabogabo yahay shirkii ay isugu yimaadeen beelaha Walaalaha ah ee Wadadaga Galmudug.
Dr. Baadiyow ayaa sheegay in Galmudug ay ka gudubtay marxaladii koowaad ee dib u heshiisiinta beelaha, isla markaana ay gabogabo tahay howshii loo idmaday gudiga dib u heshiisiinta beelaha Galmudug.
Guddoomiye Baadiyow ayaa baaq u soo jeediyey guddiyadda ka dambeeyo ee qeybta noqon doono dib u dhiska maamul goboleedka Galmudug, wuxuuna xusay in ay muhiim tahay in la saxo dhaqanka isla markaana aas-aas sax ah loo dhigo Maamulka Galmudug.
Ugu dambeyn, shirka dib u heshiisiinta Beelaha degama Galmudug ayaa waxaa la rajeynaayaa in Isniinta berri ah la soo gabgabeeyo.
HOOS KA DHAGEYSO CODKA GUDDOOMIYE BAADIYOW:
la soo gabagabeynayo